Thwebula Unlocker 1.9.2 – Vessoft
Unlocker – a Umbuso compact yakhelwe ukusebenza amafayela kuvinjwe izinqubo system. Isici esiyinhloko hlelo yikhono ukususa amafayela namafolda abahlulekile asuswe ngendlela evamile. Unlocker uyanezela isici esisha kwimenyu umongo yokusebenza izinhlelo Windows evumela ukuthi wena ukuba iwuvule ukusebenza amafayela. Isofthiwe ikuvumela ukuba afeze imisebenzi njalo kakhulu eyenziwa ezintweni: wethe, nokusula futhi ezihamba. Futhi Unlocker ivumela ukuhlela ifayela Ukusulwa kabusha olandelayo.
Ukwembula of amafayela
Ukufakwa in the imenyu
Ukusekela for imisebenzi standard
Amandla ukuhlela nokusula of amafayela
Amazwana on Unlocker:
Unlocker Ahlobene software:
English, Українська, Français, Español... CCleaner 5.26.5937 Standard, Professional futhi Portable
English, Українська, Français, Español... Wise Disk Cleaner 9.41 Standard futhi Portable
WTFast 3.5.9.511 futhi 4.0.5.616 beta
English, Español, Português, العربية... Windows 7 USB/DVD Download Tool 1.0.31.0
Development Ithuluzi Elula ukudala futhi thwebula amakhasi ewebhu ngaphandle kokwazi HTML. Isofthiwe umhleli kanye isethi izifanekiso ngomsebenzi lula nge izinto.
Abadlali Media Ithuluzi ukucinga kanye ukudlala umculo. Isofthiwe uhlela imitapo umculo bese ungakwazi ukuyifunda kanye nabangani.
English, Français, Español, Deutsch... Opera 42.0.2393.94, 43.0.2442.7 beta futhi 44.0.2440 dev
-Internet Isiphequluli fast and popular for elula ukuhlala online. Isofthiwe isekela ubuchwepheshe besimanje futhi ine imisebenzi ewusizo.